अनुहारहरु? हाम्रो मनपर्ने साहित्यिक प्रहरी को वर्तमान साहित्य
अनुहारहरु? हाम्रो मनपर्ने साहित्यिक पुलिस को
सबै हामी कसैको लागि अनुहारहरू कल्पना गर्न सक्छौं साहित्यिक चरित्र। को मामला मा पुलिस र जासूसविधाबाट सिर्जना भएका धेरै राम्रा चरित्रहरूको बृद्धि र लोकप्रियताको साथ, अपेक्षा वा अपेक्षा सामान्यतया बढी हुन्छ। यसबाहेक, प्राय ती सबै तिनीहरूकै लेखकहरूले वर्णन गरेका छन्। त्यसो भए त्यो हुन्छ सिनेमा वा टेलिभिजनले अरूलाई राख्ने काममा हुन्छ पक्षहरु। र कहिलेकाँही उनीहरू हामीलाई मनाउँछन् र कहिलेकाँही तिनीहरू विश्वास गर्दैनन्।
म अग्रिम गर्दछु कि यस लेखमा कुनै छवि छैन। त्यसैले सबै जो आफ्नो मनपर्ने सिपको त्यो अनुहार कायम राख्न जारी राख्न चाहन्छन् शान्त हुन सक्दछन्। त्यहाँ लिंक मात्र छन् यदि जिज्ञासा वा प्रलोभन एकदम उत्तम छ। मैले केहि चुनेको छु। यो अरूमा निर्भर हुनेछ। त्यसो भए "हेरौं" यसमा कर्ट वाल्यान्डर, ह्यारी बॉश, साल्भो मोन्टलबानो, लियो क्यालडास, जान फेबेल, रोक्को शियाभोन, मार्टिन सर्भाज र जीन-बप्तीस्टे एडम्सबर्ग। र यदि तपाईंले तिनीहरूलाई पहिल्यै देखिसक्नुभयो भने, तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?
यो जिज्ञासु हो कि धेरै जसो केसहरूमा ती सिनेमेटोग्राफिक वा टेलिभिजन अनुहारहरू हुन् Year० बर्ष पुरानो कलाकार औसत मा। हाम्रा केही साहित्यिक पुलिसहरू आइपुगेका छन् र आधा शताब्दी बितिसकेका छन्, तर किनभने उनीहरूले उनीहरूलाई आफ्नो पुस्तकमा पूरा पनि गरे। तर अरूले हैन र उनीहरूको अनुहारको छनौट हेर्नको लागि यो ठाउँबाट बाहिर छ। हेरौं
1 कर्ट वाल्यान्डर - रोल्फ लास्गार्ड, क्रिस्टर हेनरिक्सन र केनेथ ब्रान्घ।
2 ह्यारी बॉश - टाइटस वेलिभर
3 मोन्टलबानो बाहेक - लुका जिingगरेटि
4 लियो Caldas - Carmelo Gómez
5 जान फेबेल - पीटर लोहमेयर
6 रोक्को शियावोन - मार्को जियालिनी
7 मार्टिन सर्भाज - चार्ल्स बर्लिंग
8 जीन-बप्तीस्टे एडम्सबर्ग - जीन ह्यूजेस एन्ग्लाइड
कर्ट वाल्यान्डर - रोल्फ लास्गार्ड, क्रिस्टर हेनरिक्सन र केनेथ ब्रान्घ।
आइकोनिक स्वीडिश निरीक्षक हेन्निंग मन्केल टेलिभिजन मा धेरै अनुहार भएको छ। तीन श्रृंखला मानकेल को महान चरित्र को बनेको छ, दुई स्विडेनीस र बीबीसी बाट एक अन्तिम, सामान्य रूपमा त्रुटिपूर्ण इनभ्वाइसको। र सत्य यो हो कि तीन अनुहारहरू, ज्यादै ब्रिटिश केनेथ ब्रान्नाग लगायत, उनलाई कसरी टोन र लुक दिने भनेर जान्दछन्। वाल्याण्डर। म तिनै सिफारिस गर्दछु, तर म खास गरी Brannagh लाई प्राथमिकता दिन्छु, यद्यपि उनी सबैभन्दा प्रमाणिक छैन।
ह्यारी बॉश - टाइटस वेलिभर
विधाको अर्को महान, यस पटक याँकी, इन्स्पेक्टर हेरोनिमस "ह्यारी" बॉश हो, बाट माइकल कन्नेली। अनुभवी लस एन्जलस पुलिस, याको नायक .० शीर्षक (२ 24 औं अर्को अक्टुबर बाहिर आउँछ), उसले २०१ 2014 देखि अमेजनद्वारा निर्मित श्रृंखलामा अनुहार फेला पारे। भ्यान तीन मौसम। अभिनेता लाई तीतस वेलिभर हामीले धेरै श्रृंखला र फिल्महरूमा यो देख्यौं, खास गरी माध्यमिकको रूपमा। मेरो लागि, पुस्तकहरू मसँग सधैं रहन्छु नौ ड्र्यागनहरू, मलाई यो विकल्प मनपर्दैन।
मोन्टलबानो बाहेक - लुका जिingगरेटि
आवश्यक श्रृ ep्खलाको श्रृंखलाको एक जोडी (र इटालियाली पनि) हेर्नुहोस् RAI को बारेमा डोटोर लगभग अनन्त देखि मोन्टलबानो बाहेक एन्ड्रिया क्यामिलेरी। यसको अद्भुत सिसिली इनक्लेभ्समा यसको सेटिंगको लागि र विशेष गरी, ती कास्टि ofहरू मध्ये एकका लागि जुन उनीहरूले फेरि बनाउने साहित्यिक पात्रहरूमा पूर्ण हिट गर्दछन्। रोमन अभिनेता लुका जिingगरेटि करीव २० बर्षदेखि जीवन दिँदै आएको छ Se मौसम पहिले नै र उसले यसलाई चिसो राख्छ।
लियो Caldas - Carmelo Gómez
एक राष्ट्रिय उदाहरण। डोमिंगो भिलार शारीरिक रूपमा आफ्नो पुस्तकहरुमा उनको Vigo पुलिस निरीक्षक वर्णन गर्दैन, पानी आँखा y डु the्गाको समुद्र तट। दुबै शीर्षकहरू सिफारिस गरिएको छ, केही वर्ष पहिले यो थियो फिल्म अनुकूलन दोस्रो को। मेरो लागि, तिनीहरूले सही छनौट गरे कार्मेलो गोमेज धेरै गालिसियन लियो Caldas जस्तै।
जान फेबेल - पीटर लोहमेयर
ह्याम्बर्ग पुलिसका कमिश्नर जान फेबेल, द्वारा बनाइएको क्रेग रसलतीन टेलिभिजन चलचित्रहरूमा पनि उनको अनुहार छ। यो जर्मन अभिनेता को हो पीटर लोहमेयर, जुन मेरो नम्र रायमा यो म Fabel जस्तै फिट छैन। निम्न नामको साथ मलाई उही कुरा हुन्छ।
रोक्को शियावोन - मार्को जियालिनी
धेरै राजनीतिक अपूर्व रोमन इन्स्पेक्टर द्वारा बनाइएको एन्टोनियो मानजिनी यो विधाको अन्तिम साहित्यिक घटनाहरू मध्ये एक हो। र तिनीहरूको चार शीर्षक प्रकाशित RAI2 ले पहिले नै एक श्रृंखला गरिसक्यो। तर साहित्यिक चरित्र is 46 बर्ष पुरानो छ, र सत्य यो हो कि मार्को गियालिनी, एक रोमन अभिनेता पनि, मेरो टाउकोमा रहेको शियाभोनसँग थोरै समानता देख्दछन्।
मार्टिन सर्भाज - चार्ल्स बर्लिंग
फ्रान्सेली कमाण्डर मार्टिन सर्भाज, को बर्नार्ड मिनियर, शैली मा मेरो अर्को ठूलो नाम हो। यस समयमा त्रिकोणको पहिलो शीर्षकको अनुकूलन गरिएको छ, बरफ मुनि। र मैले चार्ल्स बर्लिंग जस्तो अनुहारको कल्पना पनि गरेन।
जीन-बप्तीस्टे एडम्सबर्ग - जीन ह्यूजेस एन्ग्लाइड
फ्रेड वर्गास सबैभन्दा धेरै सिर्जना गरियो विशेष, विलक्षण र सफल कालो उपन्यास को। र पक्कै पनि उनी आफ्नो टेलिभिजन अनुकूलनको योग्य थिए। अभिनेता जीन-ह्यूजेस एन्ग्लाइड उसलाई उसको विशेष शरीरिक लेन्ट गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » अनुहारहरु? हाम्रो मनपर्ने साहित्यिक पुलिस को
स्पेनिश प्रान्तको उपन्यास